လုပ်ငန်းသုံး Fm ရေဒီယို Transmitter | ရေဒီယိုစခန်းများအတွက် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စက် | Fm Transmitter လက်ကား
Ip မှတဆင့် ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေခြင်းကို အပါအဝင် ဆက်တင်များစွာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
* စတိုးဆိုင်များနှင့် ကုန်တိုက်များတွင် လက်လီဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်များ ဖြန့်ကျက်ချထားခြင်း။
1. Video-over-IP ဆာဗာ
IP ဗီဒီယိုဆာဗာများဟုလည်းသိကြသော ကွန်ရက်ဗီဒီယိုဆာဗာများသည် ဗီဒီယိုအဖိဒ်များကို အခြားဗီဒီယိုဆာဗာများ/PC များသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအား လုပ်ဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ဖွင့်ခြင်းအတွက် (IP interface သို့မဟုတ် SDI မှတဆင့်) စီးကြောင်းများကို ပေးပို့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင်၊ IP ကွန်ရက်တစ်ခုမှထုတ်လွှင့်နိုင်သော IP-based ဗီဒီယိုစီးကြောင်းနှင့်အတူ CCTV ကင်မရာကို ကွန်ရက်လုံခြုံရေးကင်မရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် IP ဗီဒီယိုဆာဗာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
IP ဗီဒီယိုမက်ထရစ်စနစ်သည် IP ကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်ရှိ ဗီဒီယိုများကို ဖြန့်ဝေခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ဖော်မတ်ချခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီ ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို ဖန်သားပြင်၏ matrix သို့ unicasting သို့မဟုတ် multicasting ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများစွာကို ဗီဒီယိုစခရင်များတွင် ပြသနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူများအား တစ်ဦးချင်းစီ ဗီဒီယို ဖြန့်ချီမှုပုံစံများကို အကန့်အသတ်မရှိ အရေအတွက်ပေးသည်။ ထုတ်လွှင့်မှု၊ ထိန်းချုပ်ခန်းများ၊ အစည်းအဝေးခန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စက်မှုကုန်ထုတ်မှု၊ ပညာရေးနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အက်ပ်များတွင် အသုံးများသည်။
Video-over-IP ဖြေရှင်းချက် ကိရိယာများ
1. Video-over-IP ကုဒ်နံပါတ်များ
Video-over-IP ကုဒ်ပြောင်းသည့်ကိရိယာများသည် H.264 ကဲ့သို့သော စံချိန်စံညွှန်းချုံ့နည်းများကို အသုံးပြု၍ HDMI နှင့် analog သို့မဟုတ် မြှုပ်သွင်းထားသော အသံအချက်ပြမှုများကဲ့သို့သော ဗီဒီယိုအင်တာဖေ့စ်အချက်ပြမှုများကို IP စီးကြောင်းများသို့ ပြောင်းပေးသည်။ FMUSER သည် သင့်အား ဖန်သားပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် HD အကြောင်းအရာများပြသရန်အတွက် စံ IP ကွန်ရက်တစ်ခုမှ အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုကို ထုတ်လွှင့်နိုင်စေမည့် ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးသည် — သို့မဟုတ် ဖန်သားပြင်များစွာဆီသို့ multicast အချက်ပြမှုများ— နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် FBE200 H.264/H.265 ကုဒ်ဒါစာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုပါ။
2. Video-over-IP ကုဒ်ဒါများ
Video-over-IP ကုဒ်ကုဒ်များသည် မည်သည့် IP ကွန်ရက်မှမဆို ဗီဒီယိုနှင့် အသံကို တိုးချဲ့သည်။ FMUSER သည် H.264/H.265 ပြကွက်များကဲ့သို့ စံ IP ကွန်ရက်တစ်ခုမှ အရည်အသွေးမြင့် ဗီဒီယိုကို လက်ခံရရှိနိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးပါသည်။ ဒီကုဒ်ဒါသည် H.264 ချုံ့မှုကို အသုံးပြုပြီး အလွန်နိမ့်သော လှိုင်းနှုန်း လိုအပ်သောကြောင့်၊ Full HD ဗီဒီယိုနှင့် analog အသံကို ကုဒ်လုပ်သည့်အခါ အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ ၎င်းသည် AAC အသံကုဒ်နံပါတ်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အသံအချက်ပြမှုကို လှိုင်းနှုန်းနည်းသော်လည်း အရည်အသွေးမြင့်ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Video-over-IP စံနှုန်းများနှင့် ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေမှုအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
သင့်ပရောဂျက်အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော ရုပ်ပုံဖြန့်ဝေမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ ဤအရာအချို့မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
HD ဗီဒီယိုအထိ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုပါက၊ 1080p60 နှင့် 1920 x 1200 သာ resolution များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုများအတွက် ပံ့ပိုးမှုသည် ဖြေရှင်းချက်အားလုံးအတွက် မမှန်သော်လည်း၊ ဤအရာသည် ဖြေရှင်းချက်အားလုံးအတွက် မဟုတ်သော်လည်း လှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော codecs များသည် စျေးနှုန်းအလွန်ကွာခြားသောကြောင့် အသုံးပြုသော compression အမျိုးအစားအကြောင်း လေ့လာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ လှိုင်းနှုန်းနည်းသော ပရောဂျက်များအတွက် စျေးနှုန်းမြင့်မားသော H.264/MPEG-4 AVC codec ကို အသုံးပြုသည့် ကုဒ်နံပါတ်/ဒီကုဒ်ကိရိယာများကို သင်စဉ်းစားလိုပေမည်။
ဗီဒီယိုချန်နယ်များကို စင့်ခ်လုပ်ခြင်းနှင့် optical fiber ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ယနေ့အဝေးကြီးတစ်လျှောက်တွင် 4K နှင့် 8K အထိ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ဗီဒီယိုတိုးချဲ့မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ချုံ့မထားသော၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် DisplayPort 1.2 ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများ၊ ကီးဘုတ်/မောက်စ်၊ RS232၊ USB 2.0 နှင့် အသံအတွက် လုံလောက်သော bandwidth ပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးထုတ်ချုံ့နည်းပညာများသည် 4K @ 60 Hz၊ 10-bit အရောင်အတိမ်အနက်တွင် ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို ဆုံးရှုံးမှုမရှိ ထုတ်လွှင့်နိုင်စေပါသည်။ ဆုံးရှုံးမှုမရှိ ဖိသိပ်မှုသည် ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် လှိုင်းနှုန်းပိုလိုအပ်သော်လည်း ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ပုံများနှင့် latency မပါဘဲ လုပ်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သင်၏ Video-over-IP ပရောဂျက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
သင်၏ AV နှင့်ပတ်သက်သည့် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်း သုတေသနမစတင်မီ သင့်ကိုယ်သင် မေးခွန်းအချို့မေးသင့်သည်-
AV-over-network ဖြေရှင်းချက်အသစ်ကို 1G Ethernet အခြေခံအဆောက်အအုံတွင်ပင် ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိကွန်ရက် topology တွင် ပေါင်းစည်းနိုင်ပါသလား။
မည်သည့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကောင်းနိုင်သနည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ချုံ့မထားသော ဗီဒီယိုကို လိုအပ်ပါသလား။
AV-over-IP စနစ်မှ မည်သည့် ဗီဒီယိုအဝင်နှင့် အထွက်များကို ပံ့ပိုးပေးရမည်နည်း။
မင်းရဲ့ latency ခံနိုင်ရည်က ဘာလဲ။ ဗီဒီယိုကိုသာ ဖြန့်ဝေရန် စီစဉ်နေပါက (အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု မရှိပါ)၊ သင်သည် မြင့်မားသော latency သည်းခံနိုင်မှုရှိပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ နည်းပညာကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။
ဝုဏ်အတွင်းနှင့် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအတွက် တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှင့်မှုများစွာကို ကျွန်ုပ်ပံ့ပိုးရပါမည်လား။
ရှိပြီးသား/အမွေအနှစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု ပြဿနာများရှိပါသလား။
FMUSER သည် သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော AV- သို့မဟုတ် KVM-over-IP ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ကူညီနိုင်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံနှင့် ထူးခြားသောထုတ်ကုန်အစုစုအပေါ်အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက သင့်အား မှန်ကန်သောအစိတ်အပိုင်းများရောနှောရန် အကြံပြုပါမည်။
FMUSER IP ဗီဒီယိုဖြေရှင်းချက်များသည် သင့်အား ကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်ရှိ P2P သို့မဟုတ် multicast HDMI ဗီဒီယိုနှင့် အသံကို 256 မျက်နှာပြင်အထိ တိုးချဲ့နိုင်စေကာ ၎င်းတို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် Ethernet ကွန်ရက်အတွင်း အခြားသော HD ဗီဒီယိုနှင့် အသံများကို ဖြန့်ဝေရန်အတွက် စံပြဖြစ်စေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ AV-over-IP Switching Solution – MediaCento စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ပိုမိုလေ့လာပါ – IP မှ ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း- စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းနည်းများထဲမှ အခမဲ့သရုပ်ပြတစ်ခုကို သတ်မှတ်ရန် sales@fmuser.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပါ။